Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny sary hosodoko mafana | Fanavaozana maintso
Azo antoka fa efa nieritreritra ny fomba hanampiana amin'ny fanatsarana ny insulate thermique ao an-tranonao ianao nefa tsy mila manao asa akory. Zava-dehibe ny fitazonana ireo rindrina voaravaka tsara hanatsarana ny mari-pana sy ny angovo ampiasaintsika amin'ny rivotra amin'ny trano. Ho an'ity karazana toe-javatra ity dia noforonina izy io loko mafana. Izy io dia fanavaozana ara-teknolojika lehibe izay manampy antsika hampitombo ny insulate ambonin'ny habaka noho ny fananany.
Raha te hahalala ny fananana rehetra sy ny fomba fiasan'ny loko mafana ianao dia mamakia foana 🙂
1 Toetra mampiavaka ny loko mafana
2 Toetra manokana
3 Aiza no azo ampiharana azy?
4 Ahoana ny fiasan'ny loko mafana?
5 Ohatrinona ny sarany?
Toetra mampiavaka ny loko mafana
Singa iray revolisionera eo amin'ny tontolon'ny insulation sy ny fitsitsiana angovo. Raha tsy mila manova ny karazan-materialy vita amin'ny rindrina isika dia afaka mampitombo ny insulation. Ny trano voaro tsara dia afaka manampy antsika hiaro tena amin'ny fiovan'ny mari-pana eo an-trano sy any ivelany. Amin'izany fomba izany dia tsy mijaly amin'ny ririnina mangatsiaka na ny hafanana be isika amin'ny fahavaratra. Izy io dia ampiasaina mba hitazomana ny mari-pana miorina ao an-trano.
Ho fanampin'izay dia tsy maintsy raisina an-tanana izany ny insulated tsara ny rindrina sy ny varavarankely dia hamonjy angovo. Rehefa mangatsiaka loatra na mafana loatra dia mampiasa fitaovana elektrika toa ny fanafanana sy ny fampangatsiahana rivotra isika. Samy mampiakatra be ny fanjifana herinaratra ao an-trano. Tsy hiangona fotsiny amin'ny volavolan-dalàna amin'ny alàlan'ny loko mafana isika, fa hampihena ny fandotoana ihany koa.
Ao anatin'ilay firafitra dia ahitantsika microspheres ceramic izay mihetsika amin'ny famoronana efitran-drivotra. Ity efitranon'ny rivotra ity dia tompon'andraikitra amin'ny famakiana ny tetezana misy hafanana ary manampy antsika hanokana ny tenantsika ivelany. Na dia fotsy aza ny loko amin'ny ankapobeny, dia afaka hosodokoana loko hafa hafa eo amboniny izay tsy mihena.
Manoro hevitra anao ny hanao fangatahana 2-3 palitao loko mafana ho an'ny insulated tsara mandrakizay. Raha mandoko amin'ny loko hafa isika na amin'ny loko hafa mba haingo dia tsy ho very ny fananantsika. Izany dia mahatonga azy io ho vokatra tsara sy revolisionera eny an-tsena.
Ho an'ireo fianakaviana rehetra izay tsy voaro mafy ny tranony dia tanan'ny olo-masina ity fitaovana ity. Tsy mampino ny fananany ary azo antoka ny fahombiazany. Miaraka amin'ny fizarana tsara ny loko mafana amin'ny rindrin'ny trano dia afaka manatratra izany isika tahiry hatramin'ny 40% amin'ny mari-pana sy familiana.
Etsy ankilany, manana toetra manakana ny fisehoan'ny hamandoana izy. Fahita matetika ny mahita hamandoana amin'ny rindrina antitra noho ny fandalovan'ny fantsona. Na izany aza, io loko io dia manakana ny fametahana rano amin'ny rindrina, ary noho izany dia tsy miseho ny hamandoana.
Izy io koa dia manana toetra fanoherana ny bobongolo, noho izany dia tsy hanana olana amin'ny holatra sy bakteria isika. Ity endri-javatra ity dia mifandraika amin'ilay teo aloha. Ny holatra sy ny bakteria dia mila tontolo mando mba honenana. Noho izany, amin'ny tsy famelana ny hamando hamorona amin'ny rindrina, dia tsy hanana olana amin'ity karazana ity isika.
Farany, manana loko manokana ity loko ity aza mirehitra afo. Tsy maninona raha sendra mampiditra afo aminy isika na sendra sendra lozam-pifamoivoizana. Ny loko mafana dia tsy hirehitra amin'ny toe-javatra rehetra.
Aiza no azo ampiharana azy?
Izy io dia loko ekolojika izay manampy antsika hampitombo ny firakofana ny tranontsika nefa tsy mampihena ny habaka ipetrahana. Ho fanampin'izay, rehefa mampihatra azy isika dia mahazo ihany koa fihenan'ny tabataba ivelany.
Ny loko mafana dia vokatra marobe. Tsy mila matihanina eto amin'ity tontolo ity ianao vao afaka mampihatra azy amin'ny sehatra rehetra. Ny anjara andraikiny dia tena zava-dehibe amin'ny tranobe mba hampihenana ny fandaniana amin'ny fanafanana sy ny fividianana rivotra. Azo ampiharina an-trano sy any ivelany mba hampitombo bebe kokoa ny valiny.
Ity loko ity koa dia tena takiana mafy amin'ny karazana fampiharana indostrialy sy fitehirizana. Izany dia vokatry ny fanoherana lehibe ny hafanana, ny hamandoana, ny afo ary ny tsy feteziny. Amin'ny faritra indostrialy dia mahazatra be ny mahita rindrina amin'ny toerana tsy dia tsara loatra noho ireo hetsika mitranga. Na izany aza, amin'ity loko ity dia azo tazonina ny haingon-trano tsara sy ilaina amin'ny rindrina. Izy io koa dia nampiasaina tamin'ny tafo sy tafo ho an'ny toetra mampiavaka azy.
Ahoana ny fiasan'ny loko mafana?
Fanontaniana iray izay apetratsika tsy tapaka amin'ny tenantsika. Ahoana no ahafahan'ny palitao iray mitazona ny hafanana na ny hatsiaka ao an-trano? Raha ny rindrin'ny trano aza tsy dia mandaitra loatra. Ity loko ity, aorian'ny fampiharana sy fanamainana azy, dia misy microspheres izay voalamina tsara amin'ny sosona maromaro. Ireo sosona ireo dia miforona efitrano fandraisam-bahiny mamaky ny tetezana mahamay.
Raha ampidirintsika ireo fiasa tsy miova amin'ny akora vita amin'ny seramika, dia azontsika atao ny milaza fa misy taratra taratra tranga misy taratra masoandro miseho amin'ny «bounces» ambonin'ilay loko. Amin'izany fomba izany dia mihena ny fandefasana hafanana eo ivelan'ny trano sy ny atitany. Izy io dia afaka mandà na dia 90% ny taratra masoandro infrared ary taratra ultraviolet hatramin'ny 85%.
Amin'ny orinasa isan-karazany mivarotra an'ity vokatra ity, dia notanterahina ny fitsapana handrefesana ny fitantanan'ny hafanana amin'ny loko. Nahazo ny soatoavina manodidina ny 0,05 W / m K. Ireo soatoavina ireo dia azo tamin'ny fitaovana fanamafisam-peo mahazatra hafa toy ny volon'ondry mineraly na polystyrene nitarina. Ity dia maneho ny fahombiazan'ny loko mafana amin'ny insulator.
Ny tena mampiavaka azy manokana dia ny fomba fiasa bi-direction. Midika izany fa afaka manome taratra ny hafanana avy amin'ny lafiny roa amin'ny volo nolokoina izy. Amin'ny fahavaratra dia manampy antsika hampiato ny hafanana tsy hiditra avy any ivelany izy io ary amin'ny ririnina dia mitazona azy io.
Tonga amin'ilay fanontaniana hapetranao amin'ny tenanao ianao rehefa avy nahita ny fahombiazany lehibe. Ny vidin'ny litatra amin'ity loko ity dia manodidina ny 25 Euro. Miankina amin'ny mpanamboatra sy ny lokony. Ny fotsy no mora vidy indrindra, satria azo lokoina loko hafa izy avy eo. Mihevitra fa manana ianao vokatra eo ho eo 0,8 sy 1,0 litatra isaky ny metatra toradroa ary izany ho an'ny fampiharana azy dia mazàna no soloina rano 10% amin'ny habetsaky ny rano, 700 € eo ho eo no azo isaina hitsaboana rindrina 10 x 3 m.
Mba hahatratrarana an'io fandrakofana io dia matetika no palitao roa na telo misy roller.
Araka ny hitanao, ity dia vokatra misy vidiny lafo, saingy azo antoka ny fahombiazany sy ny fahombiazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Hoso-doko mafana